Gudoomiye Mursal oo maanta tagi doona magaalada Baydhabo – Kalfadhi
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta KMG maamulka Koofur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka soconayo diyaar garow soo dhaweynta kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa u sheegay Kalfadhi in la filaayo dhawaan in magaalada Baydhabo uu ka furmo shirka golaha amniga qaranka oo diirada lagu saari doono arimaha amaanka iyo doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa safar dalka uga maqan waxana uu ku sugan yahay magaalada Doxa ee dalka Qatar waxaana la filayaa shirka amniga qaranka inuu furo Gudoomiyaha Golaha shacabka.
Waqti hore waxaa shir ka dhan ahaa dowladda Soomaaliya ay madaxda maamul goboleedyada ku yesheen magaaladaasi waxaana ku sugan intoodi badan inkastoo la filan karo in madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas uu ka tago magaalada una amba baxo Garowe sababo la xiriira xiisada u dhaxeeysa Puntland iyo Somaliland.
Horey shirka amniga qaranka ayaa dib uu u dhacay markii uu soo ifbaxay khulaafka u dhaxeyay hay’adaha fulinta iyo sharci dajinta taa oo ugu dambeen keentay inuu meesha ka baxo Gudoomiyihii Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.